Usoro ọrụ - Tai na obibi & nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd.
Biko gụọ usoro na ọnọdụ ndị a nke ọma. Ha nwere ozi dị mkpa gbasara ikike nke ndị ahịa (“Onye Ahịa”) ikike, akwụkwọ ikike, ọrụ na usoro mkpezi esemokwu dịnụ.
Tai na nkwakọ ngwaahịa na-ejikọ aka na Shanghai Anxin Packaging, Henan Lufeng Packaging, Zhejiang Xinya Packaging, Jiangsu Shanyi Packaging, na Zhejiang Dazuo Packaging. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ọ bụla na-emepụta usoro dị iche iche nke ngwaahịa, ụlọ ọrụ guzobere nwere ike ịnwe ngwaahịa zuru oke karị nke nwere ike ịhazi na ijere ndị ahịa ọhụụ na ndị ochie ozi. Anyị nwere afọ 30 nke n'ichepụta ahụmịhe n'ọhịa nke akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa, gbalịsiri ike inye nnukwu njedebe, imepụta igbe ọhụụ nke igbe igbe.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara weebụsaịtị ma ọ bụ Usoro Ojiji, biko kpọtụrụ: service@taiinpackaging.com.
Site na ịnweta na ijikọ weebụsaịtị site na ngwaọrụ ọ bụla gụnyere ma ọnweghị oke; na-agagharị na katalọgụ ahụ na weebụsaịtị, na-agụ ngalaba ndị ọzọ nke weebụsaịtị ma ọ bụ na-akpọtụrụ site na weebụsaịtị, agree kwenyere ịnakwere ma rube isi na Usoro Ojiji ndị a yana Iwu Nzuzo nke nwekwara ozi gbasara Kuki na ojiji ha. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na Usoro ọrụ ma ọ bụ amụma nzuzo a, ị kwesịrị ịhapụ weebụsaịtị ahụ wee kwụsị ọrụ ya ozugbo. Nbanye na nkwakọ ngwaahịa nwere ike ịgbanwe site n'oge ruo n'oge gbanwee ma ọ bụ melite niile nke Usoro Ọrụ a ma ọ bụ Iwu Nzuzo. Tai na nkwakọ ngwaahịa na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ Usoro nke Ọrụ mgbe niile ma bipụta otu Usoro Ojiji ndị a maka ntụnyere n'ọdịnihu.
Tonweta weebụsaịtị anaghị akwụ ụgwọ. Enwere ike ịbanye na weebụsaịtị ahụ na Tai na nkwakọ ngwaahịa nwere ike, na uche ya na enweghị ọkwa, gbanwee / kagbuo / kwụsịtụ / kwụsịtụ akụkụ ọ bụla nke weebụsaịtị ma ọ bụ dum ya. Ntinye na nkwakọ ngwaahịa enweghị ụgwọ ọ bụla nye gị ma ọ bụ ndị ọzọ, ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla ma ọ bụ dum nke weebụsaịtị agaghị enwe ike ịnweta, nweta ma ọ bụ dị maka ihe ọ bụla.
Ozi e nyere na weebụsaịtị, na n'ime Katalọgụ, bụ maka ozi izugbe naanị ma ọ bụghị mejupụta ma ọ bụ rụọ ọrịre ma ọ bụ zụta nkwekọrịta ma ọ bụ ụdị ọ bụla. Enwere ike ịrịọ ozi ndị ọzọ site na ibe 'Kpọtụrụ anyị' nke weebụsaịtị.
• ịghara ịnwa iji merie nchebe ọ bụla ma ọ bụ nchebe na weebụsaịtị;
• ịghara ịmịgharị, mbipụta abụọ, detuo ma ọ bụ ree ọ bụla akụkụ nke weebụsaịtị;
• ịghara ịnweta na-enweghị ikike, igbochi, mmebi ma ọ bụ na-akpaghasị:
- akụkụ ọ bụla nke weebụsaịtị;
- akụrụngwa ma ọ bụ ntanetị ọ bụla nke echekwara weebụsaịtị ahụ;
- sọftụwia ọ bụla ejiri mee ihe na ntanetị nke weebụsaịtị; ma ọ bụ
- akụrụngwa ma ọ bụ netwọkụ ma ọ bụ sọftụwia ọ bụla nwere ma ọ bụ jiri ndị ọzọ.
Na-enweghị mmachi, foto niile, nkọwa, vidiyo na eserese na ọdịnaya niile dị n'ime weebụsaịtị na Katalọgụ bụ akụ nke HCP Group. E kwere ka ị gaa na Weebụsaịtị, bipụta ma detuo onyonyo, ma kesaa onyonyo dị na weebụsaịtị maka iji iwu eme ihe naanị ma ọ bụghị maka iji azụmaahịa ma ọ bụ iregharị. A naghị enye gị ohere idetuo weebụsaịtị na Katalọgụ ahụ na-enweghị ikike nkwuputa nke Tai na nkwakọ ngwaahịa.
Tai na nkwakọ ngwaahịa abụghị ihe kpatara mmebi ma ọ bụ ọgba aghara ọ bụla nke njehie ọ bụla, nje, omissions, faịlụ rụrụ arụ, nsogbu njikọ, ọdịda nke ngwaọrụ, ma ọ bụ nhichapụ ọdịnaya.
Naanị ndị ahịa
Tai na nkwakọ ngwaahịa na-ere ahịa ya zuru ezu maka ndị ahịa azụmaahịa, ma na-ejekwara ndị mmadụ ozi. Ohaneze usoro kachasị dị ala bụ 2000-5000 iberibe site na imewe.
Anyị nwere ike na-enye dị iche iche na-ebi akwụkwọ ụzọ: na ihuenyo ebi akwụkwọ, na-ekpo ọkụ zọ, dechapụ obibi,
ịdebanye aha na wdg.
Anyị mmepụta oge bụ mgbe 20-25days mgbe tupu mmepụta sample nkwenye. Ọ bụrụ na a rịọrọ arịrịọ ịkagbu gị tupu anyị emezie usoro gị, anyị nwere obi ụtọ ịkagbu iwu gị maka nkwụghachi zuru ezu, mana ozugbo iwu ahụ dị na usoro, anyị enweghị ike ịkwụsị ya.
Nloghachi & Mgbanwe
Iwu ahia niile bụ nke ikpeazụ, enweghị ike ịghachite ma ọ bụ gbanwere.
Ihe mebiri emebi / Njehie
Ọ bụ ezie na a na-enyocha ngwaahịa ọ bụla maka mmesi obi ike dị mma tupu ebupu, ọ ga-ekwe omume ịnweta ihe mebiri emebi. Na mgbakwunye, n'ihi mmejọ nke mmadụ, enwere ike ihie ụzọ. Maka ebumnuche ndị a, ọ dị mkpa imepe & inyocha ihe gị ozugbo ị natara ha.
Ntinye na nkwakọ ngwaahịa abụghị ihe kpatara ọnwụ ma ọ bụ mmebi ọ bụla na-eme n'ihi igbu oge ma ọ bụ enweghị ike ịnyefe sitere na omume Chineke; ihu igwe siri ike; agha; ọdachi nkịtị; oku; etie mkpu; nsogbu ọrụ; igbu oge na nnyefe nke ihe ma ọ bụ ngwongwo site na ndị na-eweta ya; mmanye iwu gọọmentị, ụkpụrụ, mmachi ọnụ ahịa ma ọ bụ njikwa; mberede; igbu oge nke ndị na-ebu nkịtị; igbu oge na mmezi omenala; ma ọ bụ site na ihe ọ bụla ọzọ nke a na-apụghị izere ezere ma ọ bụ karịa Tai na njikwa ezi uche nke nkwakọ ngwaahịa. Enwere ike ịgbatị ụbọchị ọ bụla ị ga-eweta, na Tai na nhọrọ nchịkọta, ruo oke oge ọ bụla na-esite na mmemme ike.
Igbe Onyinye Ngosiputa Ngwa, Nkwalite Onyinye, Bag Nkwado, Igbe Onyinye, Corrugated Carton Box, Lamination Onyinye Box,